सप्तरीमा स्वाईन फ्लु र हङकङ फ्लु – Rajdhani Daily
सप्तरीमा स्वाईन फ्लु र हङकङ फ्लु
११ बिरामी भेटिए, तीन दिन विद्यालय बन्द
एम के माझी, राजविराज । सप्तरीको कञ्चनरुप नगरपालिकामा स्वाईन फ्लु र हङकङ फ्लुको प्रकोप बढेपछि उक्त नगरपालिकालाई प्रकोप क्षेत्र घोषणा गरिएको छ । नगरपालिकाको बिहीबार बसेको बैठकले प्रकोप क्षेत्र घोषणासहित आइतबारदेखि ३ दिन सम्मकालागि विद्यालय बन्दको निर्णय समेत गरेको हो ।
स्वाईन फ्लुका १ तथा हङकङ फ्लुका १० जना विरामी फेला परेको र सयौं ज्वरो र खोकीबाट पीडित हुन थालेपछि बिहीबार बसेको नगरपालिकाको आकस्मिक बैठकले नगरलाई विपद क्षेत्र घोषणा सहित ३ दिन विद्यालय बन्द गर्ने निर्णय गरिएको नगर प्रमुख बसन्त कुमार मिश्रले बताए ।
ज्वरो आउने, खोकी लाग्ने लगायतका लक्षणपछि केहीदिन लग्तै हाल ३ बालकसहित ४ जनाको मृत्यु भएको छ । कञ्चनरुप नगरपालिकाका १ जनामा स्वाईन फ्लु तथा ४ जनामा हङकङ फ्लु र हनुमाननगर कंकालिनी नगरपालिकामा ६ जना हङकङ फ्लुका विरामी फेला परेको जनस्वास्थ्य प्रमुख निरन्जन यादवले वताए ।
कञ्चनरुपका १८ तथा हनुमाननगर कंकालिनी नगरपालिकाका ६ गरी २४ जनामा गरिएको परिक्षणका यस्तो अवस्था देखिएको उनले जनाएका छन् । उनका अनुसार ८ जनाको रिपोर्ट आउन वाँकी छ । मृतक चारै जनाको रक्त परिक्षण नभएका कारण स्वाइन फ्लु वा हङकङ फ्लु बाटै मृत्यु भएको किटान गर्न चाहिँ नसकिने जनस्वास्थ्य प्रमुख यादवले बताए ।
भदौ २४ देखि कंचनरुप र हनुमाननगरमा गरिएको स्वास्थ्य शिवीर मार्फत २४ जनाको रगत र ¥याल परिक्षणका लागि काठमाण्डौ स्थित राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा पठाईएको थियो । परिक्षणमा कञ्चनरुप नगरपालिका ७ का हरिलाल साहलाई स्वाईन फ्लुको संक्रमण भएको यादवले जानकारी दिएका छन् ।
कञ्चनरूप नगरपालिका ७ का १४ वर्षीय दिवस बस्नेत, वार्ड नं. ३ का १४ वर्षीय किशोर राम र वार्ड नं. ९ का १४ वर्षीय आमोदकुमार रामको मृत्यु तथा ज्वरो र रुघाखोकीका विरामी वढ्दै गएपछि कञ्चनरुप तथा हनुमाननगर क्षेत्रमा हेल्थ क्याम्प स्थापना गरिएको थियो ।
यसैविचमा ज्वरो तथा रुघाखोकीकै कारण कञ्चनरुप नगरपालिका ४ मा ६० वर्षिया वलसाल सरदारको समेत पछिल्लो पटक मृत्यु भइसकेको छ । जिल्ला दैवी प्रकोप उद्धार समितिको बिहीबारैको आपतकालिन बैठकले प्रभावित क्षेत्रमा स्वास्थ्य टोली पठाई उपचारको व्यवस्था मिलाइएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुरेन्द्र पौडेलले बताए ।
अहिले कञ्चनरुप नगरपालिकाको वडा नम्बर २, ४ र ७ मा यस्तो शिविर स्थापना गरिएको नगरपालिकाका स्वास्थ्य संयोजक डम्बर प्रसाद गुप्ताले जानकारी दिएका छन् ।
शिविरमा विपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानका साथै स्थानीय हेल्थ पोष्टका चिकित्सकहरुले स्वास्थ्य परिक्षण गरिरहेको उनले बताए ।